Tsenambarotra an’ny fanjakana – ARMP : orinasa efatra monja no nanao tatitra | NewsMada
Tsenambarotra an’ny fanjakana – ARMP : orinasa efatra monja no nanao tatitra
Mody tsy mahalala nefa tompon’andraikitra ! Mahavariana ihany ny fitantanan-draharaham-panjakana eto amintsika. Nihaona tamin’ny tompon’andraikitry ny Fahefana mandrindra ny tsenambarotra an’ny fanjakana (ARMP), niaraka tamin’ny sampandraharahan’ny tahirimbolam-panjakana, ny alarobia teo, ny solontenan’ny orinasam-panjakana eto amintsika.
Anisan’ireo orinasa ananan’ny fanjakana ampahana petrabola betsaka (mihoatra ny antsasamanila) ny Jirama, ny Air Madagascar, ny Spat, ny Kraoma, sns. Mitotaly 22 izy ireo, nefa ny efatra ihany, ny nandefa tatitry ny drafitry ny fanomezana ny tsenam-barony tany amin’ny ARMP.
Araka ny fehezan-dalàna mifehy ny tsenam-barotra an’ny fanjakana na « marchés publics » (MP), tsy maintsy manaraka ny dingana mifehy ny MP ny orinasa ananan’ny fanjakana petrabola betsaka (and faha-3, lalàna 2004-009). Misy amin’ireo orinasam-panjakana anefa tsy mahalala (na minia tsy mahalala), toy ny tompon’andraikitra ao amin’ny orinasa iray, milaza fa « noheverinay fa natao ho an’ny rafi-panjakana, minisitera sy ny sampandraharaha mifandraika aminy ihany ny MP ».
Manoloana ireo, nampahafantarina ireo orinasa ireo ny lalàna, ny fepetra, ary anisan’ny mitaky izany rahateo ny Vondrona eoropeanina amin’ny fanohanany ny tetibolam-panjakana, araka ny fanazavan-dRtoa Haingomiarantsoa Mbolahanta, talen’ny raharaha ara-bola ao amin’ny tahirimbolam-panjakana.